Wararkii ugu dambeeyay weerarkii Alshabab ay kula wareegeen Afgooye | Baydhabo Online
Wararkii ugu dambeeyay weerarkii Alshabab ay kula wareegeen Afgooye
Wararka ka imaanaya Magaalada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in Al-shabaab ay Guud ahaan Magaalada Gacanta ku dhigeen,waxaana sidoo kale ay Difaacyo ka sameysteen Wadooyinka laga soo galo Degmada Afgooye.
Ugu yaraan 10 ruux, ayaa lagu waramaya inay ku dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen, kadib markii maleeshiyaad ka tirsan al-Shabaab ay weerar ku qaadeen degmada Afgooye ee gobolka Shabellaha Hoose, gelinkii dambe ee maanta, sida ay goob joogayaal VOA u sheegeen.
Isku Duwihii Maaliyada Gobolka Shabeelaha Hoose ee Maamulka Koonfur Galbeed Maxamuud (Qooleey) ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay weerarkii Qaraxa ku bilowday ee gelinkii dambe maanta ka dhacay Degmada Afgooye, sida ay Risaala u sheegeen Mas’uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed.
Dhanka kale Ciidamo isugu jira kuwa Dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa la sheegay in ay ku sii socdaan Magaalada Afgooye.
Weli ma jirto Cid sheegi karta Khasaaraha Rasmiga ah ee ka dhashay Dagaalka ay Shabaab kula Wareegeen Magaalada Afgooye oo Magaalada Muqdisho 30KM Galbeedka uga beegan.
Wixii ku soo kordha waan idin soo gudbineynaa.
DAHER ARREH says:
1. Somalidu waa in ay kala dortaan QARAN ama QABIIL.
2. Kuwii Somaliya ka bedelay LIBAAXI Afrika ee u bedelay
CAWRADII Afrika yaan xil loo dooran.
3. 10ka malyuun ee Somaliyeed madax mada-noqon karaan?
4. Somaaleyey aayahaaga ha aasine aayar garro Ilaahagana u noqo